ukubukela okukhulu kwe-samsung ye-galaxy esebenzayo 4 kutyhila uyilo olucekeceke kunye nemibala
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ukuvuza okukhulu kwe-Samsung Galaxy Watch Active 4 kutyhila uyilo olucekeceke kunye nemibala
Kungaphelanga iveki enye ukuba i-Samsung ityhile ' ikamva lee-smartwatches ”Kwi-MWC 2021 kwiveki ezayo, ukunikezela okuzayo I-Samsung Galaxy Watch esebenzayo 4 ukuvuza kwi-intanethi.
Le yi-Samsung Galaxy Watch Active 4
Unikezelo ekuthethwa ngalo lufikile ngoncedo lwe-leaker USteve Hemmerstoffer , ophethe irekhodi lomkhondo we-stellar, kwaye ubonise isetyhula i-smartwatch enesiyilo esincinci ngakumbi kuneemodeli zangaphambili kunye nesakhelo sesinyithi esicaba.
Xa kuthelekiswa nesizukulwana sangaphambili seGlass Watch Active 2, amaqhosha akwimo eyahlukileyo kwaye kubonakala ngathi ahamba kancinci, okuthetha ukuba kufanele kube nzima ukuphoswa kwaye banike ingxelo engakumbi xa ucofa.
Isamsung ihlaziye izibophelelo zebhendi nayo. Oko kungqinelana nobungakanani obuhlaziyiweyo beGlass Watch Active 4- imodeli engama-40mm iya kuqhubeka ukubakho, kodwa ubungakanani obukhulu be-44mm busetelwe ukwehla ukuya kwi-42mm.
Ndiyathemba ukuba i-Samsung iya kugcina ukungqinelana namabhanti amadala anje nge-Apple eyenzileyo okoko kukhutshwe i-Apple Watch yokuqala. Ukwenza njalo kunokukhuthaza abasebenzisi abaninzi ukuba baphucule kuba ngekhe bachithe imali ukufumana amabhanti amatsha.
Ngokuhanjiswa okusekwe kwi-CAD, i-Samsung Galaxy Watch Active 4 iya kufumaneka ngemibala emine ekusungulweni: uMnyama, iSilivere, iGolide, kunye noGreen. Nangona kunjalo, umbala ochanekileyo wombala usenokungachaneki ngokupheleleyo kwaye ezo mhlawumbi ayizizo amagama okugqibela okuthengisa.
Lindela iprosesa esebenzayo ngakumbi kunye nomboniso ongcono
Yonke into ekhankanywe apha ngasentla isethwe ukuba idityaniswe ne-chipn entsha yesiqhelo ye-5nm ethi & apos; zombini zibe namandla kwaye zisebenze ngakumbi kune-10nm Exynos 9110 yangoku. Inkqubo yokusebenza yeTizen iya kutshintshwa nge-Samsung kunye neGoogle & apos;
Uya kukwazi ukusebenzisa eli thuba kumboniso ohlaziyiweyo. Iinkcukacha zinqabile, kodwa iingxelo zikhomba kwi-bezels ezinciphileyo kunye neglasi ethe tyaba ye-2D kwinto ngokuqinisekileyo eya kuba yenye ye Eyona smartwatches zibalaseleyo ngo-2021 .
Amandla ebhetri acwangciselwe ukuhlala engatshintshanga, kodwa isoftware entsha kunye ne-chipset zithetha ukuba iwotshi kufuneka ihlale ixesha elide ngentlawulo enye, oko kuthetha ukuba ixesha elininzi lokuthatha ithuba lokuqina kunye neempawu zempilo.
I-Samsung kunye neapos ye-Galaxy Watch Active 4 kufuneka ibenazo zonke izinto ezisemgangathweni njengokulandela umkhondo womsebenzi kunye nokubeka esweni ukubetha kwentliziyo. Nangona kunjalo, izinto eziphambili ezifana nokubeka esweni i-ECG okanye esweni iswekile yegazi esweni kusenokwenzeka ukuba igcinelwe i-Galaxy Watch 4 esemgangathweni.
Iya kukhutshwa nini i-Samsung Galaxy Watch Active 4?
Nangona i-Samsung yenza isibhengezo kwi-MWC 2021 ngoJuni 28, uphawu lusetiwe ukuba lujolise kwisoftware yalo. Ngokukodwa, kulindeleke ukuba ibhengeze ukuba iza kulidibanisa njani iqonga elitsha le-Wear kwii-smartwatches zayo kwaye ibonise i-UI yayo yesiko.
Ke kuthekani ngesibhengezo seGlass Watch Active 4? Ewe, amarhe okuba iya kwenzeka kwi-Unpacked elandelayo ngo-Agasti 3. Galaxy Watch 4 , I-Galaxy Z Fold 3, i-Galaxy Z Flip 3, kunye ne-Galaxy Buds 2 kulindeleke ukuba zivele kwangolo suku lunye.
Ngokumalunga nomhla obaluleke kakhulu wokukhutshwa, iya kuthi iphelele ku-Agasti. I-Galaxy Z Fold 3 kulindeleke ukuba ibethe amashalofu ngo-Agasti 27, kwaye i-Samsung inokukhetha loo mhla kwii-smartwatches zayo ezilandelayo.
Ixabiso leGlass Watch Active 4 alibalekanga okwangoku, nangona kulindeleke ukuba libekwe njengembangi kwiApple Watch SE. Unoko engqondweni, kunye nexabiso le-Galaxy Watch Active 2, kukho ii-Apos ithuba elihle lokuba i-Galaxy Watch Active 4 ixabise i-279 yeedola e-US.
zama ukubamba ifayile ayifumanekanga ngaphandle kweJava
Imephu yokugubungela imephu yokuthelekisa imephu ngo-2017
I-Samsung Galaxy Note 20 Ultra vs Apple iPhone 11 Pro Max
I-Google Pixel 3 XL vs LG V40 ThinQ
Ngoku ungabelana ngendawo yakho yexesha langempela kwiGoogle Maps kwi-Android kunye ne-iOS
Ungayikhubaza njani ibloatware kwi-Samsung Galaxy S III yakho: iiapps zikhuselekile ukuba zisuswe
I-Samsung Galaxy Qaphela 8 vs Apple iPhone 7 Plus
Nantsi iapos; apho i-microSD slot iya kuba kwi-Motorola DROID MAXX 2 (kwaye ikwiMoto X Dlala)
Buyela kwintengiso yesikolo kunye nezahlulo kwi-2019: Jonga ezi zinto zibalulekileyo ze-iPad, iMacBook, kunye nokunye